Ovy sy atody (Oeuf et Pommes de Terre) - Recette de cuisine malagasy
Ovy sy atody
par Gaël RAKOTOVAO	 24 mai 2016
Zao no atao eo rehefa irery ato an-trano, hoy ilay namana iray izay hoe « cuisine du reste de frigo et du placard »: Ovy sy Atody. Afaka ampiarahina amin’ny salade anandrano ra toa ka kamo ahandro vary.
Isan’ny olona: 1
Fotoana iketrehana azy: 5 mn
Pommes de Terres (Ovy),
oignons, sel, poivre, huile
Fikarakarana Ovy sy atody
Tetehina en rondelles fisaka ny ovy dia endasina amin’ny menaka kely, tsy atao mahazo loko be.
Rehefa hita fa masaka ny ovy, arotsaka ny oignons voatetika en rondelles sy sel sy poivre ary endakendasina miaraka amin’ny ovy.
Arotsaka ny atody voakapoka dia avadika rehefa mitambatra na saromana kely raha tsy tiana ho mendy be ny atody.
karazana sakafo malagasy, laoka anio, laoka malagasy, laoka tsotra, sakafo nahandro gasy
Article précédent : Foire de l’élevage et de la production animale à Madagascar
Poulet pané à la façon malagasyArticle suivant :